December | 2007 | Moep1's Blog
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် ၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၂၀၀၇)
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ သည် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရွာငံမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိသည့် မြို့ကြီးရေလှောင်တမံ ဘက်စုံစီမံကိန်း လုပ်ငန်းနှင့် မန္တလေးတိုင်း၊ မန္တလေးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ရဲ-ယမန်းကျေးရွာအနီးတွင် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ဒီဇင်ဘာ (၁၁)ရက်တွင် လှည့်လည်သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နှင့်အဖွဲ့သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြို့ကြီးရေလှောင်တမံ ဘက်စုံစီမံကိန်းမှ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ရောက်ရှိကြသည်။ ရှေးဦးစွာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်တွင် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန အမှတ် (၂)တည်ဆောက်ရေးက တာဝန်ယူ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်တွင် ရေလှောင်တမံ ၂၂၆၄ ပေ၊ အမြင့် ၄၃၃ ပေရှိ ကွန်ကရစ်တမံ ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပါကြေင်း၊ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ တတ်ဆင်စက်အင်အားမဂ္ဂါဝပ် ၇၉၀ ရှိမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ၃၅၅၀ ထုတ်လုပ်ပေးသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပဏာမရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက ရေလွှဲဥမင်လိုဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ရေယူအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပင်မတမံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ ရေပိုလွှဲ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ တမံအတွင်းပိုင်း ဖိအားမြင့် သံမဏိ ပိုက်လိုင်း တတ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းအလိုက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်က ရဲရွာ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ ပင်မကွန်ကရစ်တမံ၊ ဖိအားမြင့် သံမဏိ ပိုက်လိုင်း တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် အရည်အသွေး မြင့်မားရေး အတွက် သပ္ပံနည်းကျ စနစ်တကျ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်က ရဲရွာ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ အထက်မြစ်ငယ် မြစ်ရိုး တလျှောက် ရေအားလျှပ်စစ် အရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ် နိုင်ရေးအတွက် စူးစမ်းရှာဖွေ ဆောင်ရွက် ကြရန် ဟူသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့တောင်ဘက် ၃၂ မိုင်ခန့် အကွာ ရေတွင်းကြီးကျေးရွာအနီးရှိ နမ္မတူမြစ် (မြစ်ငယ်မြစ်) ပေါ်၌ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ပြောင်လျှိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စူးစမ်းလေ့လာမှုများနှင့် တွေ့ရှိချက်များ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
Comments Off on ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
Senior General Than Shwe inspects Myogyi Multi-purpose Dam Project, Yeywa Hydropower Project
(NAY PYI TAW, 20 Dec, 2007)
Chairman of the State Peace and Development Council Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Than Shwe yesterday inspected Myogyi Multi-purpose Dam Project being implemented in Ywangan Township, Shan State (South), and Yeywa Hydropower Project being implemented near Ye-yaman Village, south-east of Mandalay, in Mandalay Division.
Senior General Than Shwe, together with SPDC Member General Thura Shwe Mann, SPDC members Lt-Gen Ye Myint, Lt-Gen Kyaw Win and Lt-Gen Tin Aye, Commander-in-Chief (Navy) Vice-Admiral Soe Thein, Commander-in-Chief (Air) Lt-Gen Myat Hein, Lt-Gen Myint Hlaing, Lt-Gen Ye Myint and Maj-Gen Khin Zaw of the Ministry of Defence, Adjutant-General Maj-Gen Thura Myint Aung, commanders of commands, the ministers, the chairman of Magway Division PDC, and officials of the SPDC Office, arrived by helicopter at Myogyi Multi-purpose Dam Project site at 9.30 am.
Senior General Than Shwe and party went to Yeywa hydropower project by helicopter.
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min reported on the project. He said the project is being undertaken by No2Construction of Hydropower Project Implementation Department. Roller compacted concrete dam, 2,264 feet long and 433 feet high, is being built on Myitnge River.The 790 megawatts project can generate 3,550 million kilowatt hours yearly.The minister also explained completion of diversion tunnel and approach tunnels, construction of intake structure, the main dam, spillways, laying of steel pipelines, construction of power station and progress of work.
Next, Deputy Minister for Electric Power No 1 U Myo Myint reported on laying of pipelines and systematic inspection in construction of power station.The deputy minister said the Senior General had given guidance on exploration of hydro power resources along Myitnge River. Deputy Minister U Myo Myint reported on data of Pyaungsho hydropower project to be implemented on Namtu River (Myitnge River) near Yaydwingyi Village, 32 miles south of Nawnghkio Township in accord in his guidance, survey, findings and preparations.
Next, Minister for Science and Technology U Thaung and Minister for Construction Maj-Gen Saw Tun reported on construction of short cut road linking Yeywa hydropower project site and Kyaukse Township and progress of work.
In this connection, Senior General Than Shwe said the project contributes towards the national development and raising the standard of living of the people. He spoke of the need to complete the project systematically as soon as possible.
Senior General Than Shwe presented fruit baskets to consultant engineer Mr Ljubomir Djordjevic of Colenco Power Engineering Ltd, project manager Mr Ye Zhijiang of China Gezhouba Group Corporation and Director U Myint Zaw of No2Construction of Hydropower Project Implementation Department.
Senior General Than Shwe and party inspected production of sample concrete core. They observed thermometer, barometer and scale model of Yeywa Hydropower Project. He inspected progress of work on the site and construction of approach tunnel. They then went through the tunnel.Diversion tunnel No 1 and No 2, laying of concrete of diversion structure and earth work of the switch yard have been completed cent per cent.
Comments Off on Senior General Than Shwe inspects Myogyi Multi-purpose Dam Project, Yeywa Hydropower Project	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (တီကျစ်)
ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (တီကျစ်)သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ ပြင်သာရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ .၄၂၀၀၅)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းငွေ(ကျပ်) (၁၅၁၁၅.၁၈) သန်း နှင့် နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန် ဒေါ်လာ) (၄၂.၉၃၆) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ စက်တတ်ဆင် စွမ်းအားမှာ (၁၂၀)မ၀္ဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၉၆၀)ခန့်ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။
Comments Off on ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (တီကျစ်)	| တီကျစ် (Tigyit)	| Permalink
ရဲနွယ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Yenwe Hydropower Station)
ရဲနွယ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ
ရဲနွယ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသည် ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ (၁၂.၂.၂၀၀၆)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စက်တပ်ဆင် စွမ်းအားမှာ (၂၅) မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၁၂၃) ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။
Comments Off on ရဲနွယ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Yenwe Hydropower Station)	| ရဲနွယ် (Yenwe)	| Permalink
မုန်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Mone Hydropower Station)
မုန်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ
မုန်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသည် မကွေးတိုင်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ (၂၇.၁၁.၂၀၀၄) ရက်နေ့တွင် စက်စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းငွေ(ကျပ်) (၃၂၈၇) သန်း နှင့် နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန် ဒေါ်လာ) (၃၂) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ စက်တပ်ဆင် စွမ်းအားမှာ (၇၅)မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၃၃၀) ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။
Comments Off on မုန်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Mone Hydropower Station)	| မုန်း (Mone)	| Permalink
ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Paunglaung Hydropwer Station)
ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ
ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသည် နေပြည်တော်တိုင်း၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ (၁.၂.၁၉၉၇) ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ (၂၅.၃.၂၀၀၅) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းငွေ(ကျပ်) (၆၃၀၆.၃) သန်း၊ နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန် ဒေါ်လာ) (၁၇၀) သန်း နှင့် နိုင်ငံခြားငွေ(ယန်း) (၁၇၂၄) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ စက်တပ်ဆင် စွမ်းအားမှာ (၂၈၀)မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၉၁၁) ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။
Comments Off on ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Paunglaung Hydropwer Station)	| ပေါင်းလောင်း (Paunglaung)	| Permalink
သဖန်းဆိပ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Thapanseik Hydropower Station)
သဖန်းဆိပ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ
သဖန်းဆိပ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကျွန်းလှမြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ (၁၈.၆.၂၀၀၂) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းငွေ(ကျပ်) (၁၃၇၅) သန်းနှင့် နိုင်ငံခြားငွေ(အမေရိကန် ဒေါ်လာ) (၂၀) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ စက်တပ်ဆင် စွမ်းအားမှာ (၃၀)မဂ္ဂါဝပ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၁၁၇.၂) ထုတ်လုပ် လျက်ရှိပါသည်။
Comments Off on သဖန်းဆိပ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Thapanseik Hydropower Station)	| သဖန်းဆိပ် (Thapanseik)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for December, 2007.